Intengiso yokudibana kunye nokuthotyelwa kwe-CAN-SPAM Martech Zone
Ukuthengisa ngokudibeneyo kunye nokuthotyelwa kwe-CAN-SPAM
NgoLwesine, uJuni 23, 2016 Douglas Karr
Ndibukele abahlobo bam abaninzi kwishishini bedlala ngokukhawuleza kakhulu kwaye bekhululekile ngemigaqo, kwaye ndinoloyiko lokuba ngenye imini baya kuba sengxakini. Ukungazi nto akukho sizathu kwaye kuba le yimicimbi yolawulo, isohlwayo maxa wambi sibiza ixabiso eliphantsi kunokukhusela kuyo. Olunye ulwaphulo oluphambili endilubonayo zezi:
Ayibhengezi ukuba unayo ubudlelwane bezemali kunye nenkampani- nokuba ungumnini, umtyali mali, okanye umphembeleli ohlawulelweyo ukukhuthaza inkampani kukwaphula umthetho Izikhokelo malunga nokuSebenzisa iiNdawo zokuNgqinisisa okanye ubungqina kwiNtengiso.
Spamming abantu abanoncedo lokudibana ukuba awunabo ubudlelwane beshishini obudlulileyo kunye nabo kwaye ungaboneleli ngazo naziphi na iindlela zokungabhalisi. Iibhlog kunye noosomashishini abancinci babonakala bekwenza oku kancinci, becinga ukuba nabani na abadibana naye banokucela. Nangona kunjalo, banokuhlawula isohlwayo esomeleleyo xa bengayeki ukwaphula imigaqo. Funda Uthini umthetho we-CAN-SPAM?
Kwaye nokuba umthumeli uyathobela i-CAN-SPAM, bahlala becacisa ubudlelwane bezezimali kunye nommkeli. Ukuba uyazi umntu owaphula nokuba ngowuphi umgaqo, thumela ikhonkco kweli nqaku kwaye ubalumkise ukuba bayeke.
Unokuba njalo uxelwe kwi-FTC kunye nokuhlawuliswa kobuso ukuya kuthi ga kwi-16,000 yeedola kwi-imeyile nganye eyahlukeneyo ethunyelweyo!
Nantsi infographic epheleleyo evela Imogaqo.cn:
tags: intengisourhwebo umanyanisoUnokwenza ugaxekileNgaba ukuthotyelwa kogaxekileugaxekile-spamimeyile engafunwayoiziphakamisoIzikhokelo malunga nokusetyenziswa kokungqinisisa okanye ubungqina kubhengezoukhuselekoispemuUbungqina
I-Pantheon: I-WordPress enzulu okanye i-Drupal Hosting nge-Relic entsha